Homeताजा भिडियोदसैं सकिएसी शिशिर भण्डारीले यस कारण नेपाल छाडेर अष्ट्रेलिया जादै! (भिडियो)
October 7, 2019 Spnews ताजा भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on दसैं सकिएसी शिशिर भण्डारीले यस कारण नेपाल छाडेर अष्ट्रेलिया जादै! (भिडियो)
शिशिर भण्डारीले छोटो समयमा दर्शकको मन जितेका छन् युटुबको होस्ट भएर । उनी एक कलाकार पनि हुन । उनले थुप्रै चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् भने कैयौ गीतपनी गाईसकेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनले गीतमा मोडलिङपनी गरेका छन् । उनी हालै ओएसनेपाल द्वारा आयोजित अवार्डमा उनी टप ५ को नोमिनेशनमा पनि परेका छन् ।
शिशिरले कैयौ काम गरेतापनी उनी बिदेश भने आज सम्म नगएको कुरा उनले बताए । अव बिदेश जाने रहर उनको पुरा हुँदैछ । उनी अव अष्ट्रेलिया टुरकोलागी जादैछन् । उनी एक कन्सलटेन्सिको ब्राण्ड एम्बेस्टर भएसंगै अष्ट्रेलिया टुर जाने भएका हुन् । उनले अष्ट्रेलिया गएर त्यहा दु:खमा परेका नेपालीसंग भेट्ने उनले जनाएका छन् । हेरौ बाँकीकुरा भिडियोमा